Kakor | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Informationsverige.se - Ku hagaha bulshada Iswiidhan / Ku saabsan boggan intarnat-ka / Kakor
Boggan waxaa ku jira waxa lagu magacaabo kakor (cookies). Kaka waa fayl yar oo qoraalo ah oo boggani ku kaydiyo kombiyuutarkaaga.
Haddii aanad doonayn inaad isticmaasho cookies waxaad dooran kartaa in aanad aqbalin cookies dhinaca gudaha akhriyaha shabakadaada. Haddii aad tani samayso markaasi ma isticmaali kartid dhamaan hawlaha ku jira boggan.
Sidan ayaanu u isticmaalnaa kakor
Informationsverige.se waxay kakor u isticmaashaa si boggan intarnatka loogu fiicnaysiiyo soo booqdayaasha. Waxaanu qaadnaa tusaale ahaan tirakoob aan qof loo raadraaci karin. Wax macluumaad shakhsi ah, sida e-boosto ama magac, ma laga kaydiyo soo booqdaha.
25-ki Julaay 2003 waxaa dhaqan galay sharciga ku saabsan iskaarsiinta elaktarooniga ah. Si taasi waafaqsan waxaa khasab nagu ah inaanu idinku wargelino:
in boggan ay ku jiraan cookies,
waxa cookies loo isticmaalo iyo
sida cookies la isaga ilaalin karo.
Waxaa jira laba nooc oo ah kakor
Kaka joogto ah wuxuu ku haraa kombiyuutarkaaga xilli wakhti go'an ah. Tani waxaa loo isticmaalaa tusaale ahaan dhinaca shaqooyinka sheegaya waxa cusub tan iyo markii ugu dambeysay ee aad booqatay boggan. Tani waxaa kale oo loo isticmaali karaa in aad xusuusato haddii aad samaysay isbaddelo. Waxay ahaan kartaa tusaale ahaan in la xusuusto luqada aad dooratay.
Kaka muddo ahi wuxuu si ku meel gaar ah ugu kaydsamaa xusuusta kombiyuutarkaaga xilliga wakhtiga aad ku jirto bog intarnatka ah. Kaka muddo ah wuu baa'baa marka aad xirto akhriyaha shabakada.
Iska xir shaqada kak
Haddii aanad aqbalin in kakor la isticmaalo waxaad iska xiri kartaa kakor ku jira akhriyaha shabakadaada nidaamyadeeda amaanka.